AIZA NO ALEHA : Bonara Be- 67 ha -
AccueilVaovao SamihafaAIZA NO ALEHA : Bonara Be- 67 ha
12/01/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Fifampiarahabana tratry ny taona hiarahana amin’i Stéphanie
Ho an’ireo tsy afaka niaraka namarana ny taona taminy, teny amin’ny CCI Ivato, manome fotoana ireo mpankafy azy etsy amin’ny Bonare Be, 67 Ha indray I Stéphanie, ao anatin’ny hetsika mbola fifampiarahabana tratry ny taona. Hetsika hanombohany ny fampisehoana amin’ity taona ity ary hiangaliany ireo hira nahafantarana azy hatramin’izay miainga any amin’ny « Tsy misy roiroy » ka hatramin’ny hiaka farany « Za aminao » mandalo ny « Dontsiky », « Tsy vaha-olana »…
Hanamarika ny fiverenany an-tanidrazana i Tirike
Mpanakanto nanana ny lazany tany amin’ny taona 90. Rehefa nila ravin’ahitra tany ivelany tany, mandalo an-tanindrazana ary manamarika izany fiverenany izany amin’ny seho takariva i Tirike. Etsy amin’ny Jao’s Pub Ambohipo no hanolorany izany anio alina manomboka amin’ny 8 ora alina. Nahafantarana ity mpanakanto avy any Ampanihy ity ny fivohizana ny gadona tsapiky ary dia hanakoako eny Ambohipo io gadona io ao anatin’ireo hira nahafantarana azy toy ny « ‘Ty raha Henane », « anao ‘zay », « Misengesenge »… ary indrindra ny hira milamindamina nahafantarana azy toy ny « Vinanto ».
La Pallette – Antsirabe
Hitondra tsiaro an’i Tôty ireo mpitendry namany
Mpitendry fantatra tamin’ny fahaizany nitendry gitara beso. 12 taona taorian’ny nahafatesany, hitondra tsiaro ho an’i Tôty ireo mpitendry namany amin’ny seho takariva hotanterahiny any amin’ny La Pallette any Antsirabe anio alina. Hitondra sy hampiaraka ny talentany amin’izany ry Harty Andriambelo, Silo, Mika, Jacquis, Ralph, Toky AR, Junior, Cedric, Mimi Jaofera, Tsiky Marly, Mirana Dizzy Brains, Zix Mpamanga ary Solofo. Mazava fa hanana ny anjara toerany eo amin’ny seho ireo rakikira nandraisany anjara ny fanatontosana azy toy ny « Feno loatra » an’i Arison Vonjy, « Tsy moramora mitady vola » an’i Mily Ckément, « Ikalangita » an’ny Olombelo Ricky, « Jamba » an’i Rija Ramanantoanina….
Hirahira sy kalokalo fahiny miaraka amin’ny tarika Jeneraly
Taorian’ny nahafatesan’i Gabhy, somary nangingina ny tarika. Nifoha tamin’ny torimasony kosa taorian’ny fifantenana izay hasolo azy, ka nifidianana an’i Manitra. Saika mbola mirona amin’ny seho takariva aloha ny tarika amin’ny ankapobeny ary ao anatin’ireny no hikaloiny ireo hira nahafantarana ny tarika tany amin’ny taona 80 raha tsy hitanisa afa-tsy ny « zany vehivavy zany », « Kala Françoise », « Taoka », « Hirahira kalokalo », « Dadabenay »…
Ao anatin’ny fivahinianana ataony any Italia. Niatrika ny hetsika fankalazana ny faha-72 taonan’ny FAO, na ny rafitra eo anivon’ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena, ary nanamarihana ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho ...Tohiny